WAEC IGBO ANSWERS 2020 CONFIRMED – My Scholarship Baze
Here is the waec igbo answers 2020, in this post, we will keep updating the igbo answers 2020, stay close and get the answers clear. Good luck
Nchedo bụ nwa agbọghọ, ejiri maka ya wee kpọọ ya bụ ikpe. Ụmụ Okorobịa asaa n’obodo Nwabọluche, gbakọrọ aka wee jee na nke Igwe kpesara ya ka Nchedo siri wee ghọlia ha nile, ma kwee ha nkwa n’iche n’iche, na ọ ga alụ ha. Ihe wutere ụmụ okorobịa ndị mere ha jiri wee gaa na nke Igwe bụ na, omego afọ abụọ
Nchedo jiri wee na ayịkọ ha nile, na anara ha ego maka ihe dị iche ịche, ma na ekwekwa ha nkwa na ha ga alụ ya. Ọ ruola afọ abụọ tupu ụmụ okorobịa asaa ndia, were chọpụta aghụghọ Nchedo na-agho ha. Iwe juputara ha obi mgbe ha chọpụtara, ha nile wee kgbakoo ọnụ jee kọsárá Igwe obodo ihe ha gabi gara n’aka nwa agbọghọ a bụ Nchedo.
Igwe obodo kàrà íkpè a n’ama Nwabọluche, ndị Ichịe na-kwa ụmụada ka Igwe tinyere ya bụ ikpe n’aka. A kpọpụtara Nchedo n’ama jụọ ya ajụjụ gbasara ikpe ụmụ okorobịa butere gbasara ya.
Nchedo mechiri anya ya wee kpọọ ụmụ okorobịa ndị a aha n’otu n’otu, wee si ha na bụ ndị nzuzu, ya mere ọ jírí wee ghọlia ha.
Ndi ụmụ ada gwara Nchedo ka oyoo ụmụ okorobịa ahụ mgbaghara, mana kọ osina dị, obi Nchedo mere mkpọchi, ọ geghị onye ọ bụla ntị. Ndị ichie were iwe nke ukwuu, ha jikọrọ aka ọnụ wee mapụ Nchedo n’obodo, maka ha kwekọrịtara n’ụdị àgwà nwa agbọghọ ahụ bụ Nchedo kpara, ga akuziri ụmụ agbọghọ na’etolite etolite ajọ ihe.